सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक आज बस्दै, प्रधानमन्त्री के गर्छन् ? — onlinedabali.com
सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक आज बस्दै, प्रधानमन्त्री के गर्छन् ?
काठमाडौं । आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । आज दिउँसो २ बजे संसद भवनको ल्होत्से हलमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक सापकोटाले बोलाएका छन् ।
संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिएका पार्टीहरुबीच साझा धारणा बनाउन सभामुखले प्रयास गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, संसद् विघटन, अदालतमा पेशी, आफू कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सुझाव पनि सभामुखले माग्ने बताइएको छ ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाइएको छ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बैठकमा बोलाइएको छ । बैठकमा उपस्थितिको लागि आग्रह गरिएको पत्र एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको गरिएको थियो । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नजाने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सभामुख सापकोटाले यसअघि पूर्वसभामुखहरु, कानुन व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा असाधारण कदम चाल्ने बताएका सापकोटाले छलफल र परामर्शमा जोड दिएका छन् ।